> Resource > Video > Video Rotator u Mac: Sida loo Laablaab Video ku Mac
Weligaa ma duubay video aad iPhone, Sony ama fiidiyo oo keliya si aad u ogaato in video la isku beddeli 90 darajo ama 180 digrii marka aad u ciyaaro daafaca aad Mac? Ma u malaynaysaa in ay tahay dhibaato ah tan iyo Apple ma waxaa ka mid ah aalad wareeji iMovie shidmaan ? Nasiib wanaag, ma jirto xal u fiican ah - Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Tani video rotator fudud Mac kuu ogolaanayaa inaad isku shaandheyn MP4, FLV, AVI, VOB, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, DAT, wmv iyo MKV videos gudban ama vertical fudayd.
1 dar video aad rabto in aad isku shaandheyn
Just free download Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) oo abuurtaan. Si aad ku dari aad video files, si toos ah jiidi oo iyaga hoos u ka Finder barnaamijka. Markaasaa files keeno muuqan doona album ee suuqa hoose. Ka dib markii in, jiidi files ka album in storyboard .
2 Badal videos ku qasabno yar
Marka files video waxaa lagu daraa storyboard ah, riix "beddesha" button (waa dhexe ee bar qalabka). Markaas suuqa kala tafatir ah, riix mid ka mid ah flip badhamada inay isku shaandheyn ku videos. Button ugu horeeya ee kuu ogolaanaya in aad isku shaandheyn videos by 90 darajo u socoto. Waxaa Riix si joogta ah oo aad isku shaandheyn karaa videos 90 darajo, 180 digrii, 270 darajo oo isbedel lahayn. Button labaad u saamaxaaya in ay isku shaandheyn ay 90 darajo counterclockwise. The button saddexaad iyo kan afraad ha idin ​​ku dhajisan MP4 video gudban iyo vertical siday u kala horreeyaan. Inkasta oo riixaya badhanka, waxaad arki karin saamaynta ay ku screen Xiisaha waqti isku mid ah. Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, riix "samayn".
3 Laablaab video ku wareejiyo si joogto ah
Marka aad file video waxaa dhammaataan isku beddeli, riix "Dhoofinta" button. Si aad u badbaadin qaabab kala duwan, u tag ah "qaabab" tab iyo dooran wax kasta oo qaab aad rabto. Dhammaan qaabab video caanka ah sida MOV, M4V, MP4, AVI, wmv, FLV, MPEG iyo wixii la mid ah waxaa taageera. Haddii aad rabto in aad badbaadin iyo ciyaaro video ku saabsan iPhone, iPad iyo iPod, u tag "Device" tab iyo doorasho qalab ka mid ah liiska. Waxa kale oo aad ku gubi karaa qumman videos in DVD cajalladaha loogu daawashada TV-ga ama si toos ah u geliyaan in YouTube wadaaga online.
Ka sokow shaqada qoqobada, taas qalab video tafatirka weyn u isticmaala Mac sidoo kale awood u aad kala videos qaybo yar yar, goo videos , biiri gaar ah video files galay mid ka mid file, dalagga qaybo rabin off videos, dalban saamaynta gaarka ah videos, iwm All waxyaabahan halkan yihiin, waayo, waxaad si loo baadho!
Sida loo soo dejinta AVCHD in Adobe jilitaankii la tayo wanaagsan